umshuwalense wemoto wabasebenzi abasha and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe - Gary Bailey
Tag: umshuwalense wemoto wabasebenzi abasha and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe
Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe Pretoria
Umshuwalense wemoto uyinto ebaluleke kakhulu kubo bonke abanikazi bemoto, kungakhathaliseki ukuthi bangaphi. Wonke amagesi kahulumeni anezidingo zawo siqu. Kunezinye izidingo ezidingekayo abashayeli ukuze bakwazi ukuthenga umshwalense futhi bakwazi ukushayela ngaphandle kokungena enkingeni. Futhi, umshuwalense wemoto ungase ube yinto ebiza kakhulu futhi eyinkimbinkimbi. Abashayeli abaningi bazithola besebenza futhi abaziqondi izimo eziphuthumayo ezihlanganisiwe. Kubalulekile ukukhuluma nochwepheshe mayelana neminye yomshuwalense, Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe ku Pretoria kodwa kukhona okuyisisekelo ukuthi wonke umuntu ofuna umshuwalense wemoto kufanele aqonde.
Ngomshwalense wemoto yomshuwalense, ngokuvamile kunezinhlobo ezimbili zezicelo ongayithola futhi ziyimpahla kanye nemfanelo. Ngokuvamile, Isithuthuthu Somshuwalense ENingizimu Afrika umthwalo wemfanelo uzokufihla umnikazi wemoto ngazo zonke izizathu ezinjengezinhloso zokulimaza noma ukunganaki. Umshuwalense womhlaba, ngakolunye uhlangothi uhlanganisa noma yimuphi umonakalo owenzelwa emotweni yakho noma umonakalo owenziwe kwenye imoto.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhishwa imali kungukuthi uzodinga ukuzixazulula ngaphambi kokuba inkampani ithathe isimangalo. Esimweni esinjalo, Ukucaphuna Umshuwalense Webhizinisi kunesidakamizwa kuzo zonke izenzakalo kanye nayo yonke inqubomgomo. Uma i-deductible iphakanyiswa, ama-premium ahla.
Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe ku Pretoria ?
Inqubomgomo Yomshuwalense Wezimoto
Iyini Umshuwalense We-Auto?
Umshuwalense wokuzenzekelayo ungumkhiqizo owathengiwe futhi ongakhokhela umonakalo wemoto yakho noma izimoto zabanye uma kwenzeka umonakalo wemoto noma umonakalo ohlobene nengozi . Umbuso ngamunye unemithetho yawo ngokuphathelene nomshuwalense wemoto ukuthi umuntu ngamunye kufanele akwazi ukushayela ngokomthetho. Izici eziningi ezihlukahlukene zithinta amazinga omshwalense wemoto, futhi. Ayisho ngisho nasezinkampanini ezihlukahlukene; kufike embonini yomshuwalense ukunquma ukuthi yimuphi umshuwalense wemoto nokuthi umuntu ngamunye uzokhokhela kanjani ukukhokhelwa ngokuzenzakalela.
Iyini umshuwalense wemoto? Kubonakala sengathi umbuzo oyisisekelo. Kodwa-ke, kunezici eziningi nezakhi ezihlukahlukene okufanele zicabange ngomshuwalense wemoto ukuthi ungaba nzima kakhulu uma ungekho olungiselelwe lokho okungena kuwo. Udinga ukwazi ukuthi amanani akholwa kangakanani ukuthi yiziphi izinhlobo zokubheka itholakale, kungakanani okudingekayo noma ungathola, nokuthi yiziphi izinkampani ezinikeza umshwalense wezimoto ezihamba phambili ngezidingo zakho.
Ngabe I-Auto Insurance Cover?
Umshwalense wokusebenzisa umshini usetshenziselwa ukukuvikela umuntu noma ibhizinisi noma inhlangano ekulahlekelweni kwezimali mayelana nemoto. Ukulahlekelwa ngokwezimali kungenzeke ngenxa yezizathu eziningi, futhi ukuba nomshuwalense wezimoto kungakufihla ukulahleka kwakho ngezindlela ezihlukahlukene.
Ukubangela Ukulimala Kwempahla
Umsebenzi umonakalo wendawo uhloswe ngokumelene nomonakalo wena noma umuntu oshayela imoto yakho ngemvume yakho kwenzalo yomunye umuntu. Izindleko zingabandakanya enye imoto, izingodo zomsebenzi, izicingo, izakhiwo, amakhaya, amabhizinisi, noma cishe noma yiluphi uhlobo lwesakhiwo semoto yakho ethinta.
Ukuhlangana < Ukubambisana ngokubambisana kuvame ukuvikela imoto yakho ekulimazeni okubangelwa ngengozi eminye imoto, i-pothole, imoto igxuma ngaphezulu, njll. Ukuqoqwa kokubambisana kuzokukhokhela ukulungisa imoto yakho, noma uma imoto yakho ibonakale engozini, iyokubuyisela ukubaluleka kwemoto ukukhipha ukukhishwa kwezimali futhi kwezinye izimo nezinye izindleko.
UKUFAKA UKUHLELA E-USA
Umshuwalense we-Auto kuyadingeka, futhi lokhu kubonakala ngokucacile ukuthi wonke amazwe athi wase-USA uye wenza ukuba kube nomshuwalense wemoto kuzo zonke izimoto. Esikhathini esiningi, lokhu kubonakala sengathi kuyisivivinyo sokukhathazeka, kodwa kungani ulinde uze uhlanganyele engozini ukuthola ukuthi ukuthatha ikhava yemoto kunakekela kanjani izimpahla zakho nawe. Izindleko eziphezulu zezokwelapha nezokugwetshwa kwezigwegwe ekukhuphukeni kwenza kube kuhle ukuzivikela wena nemoto yakho eyigugu ngemoto yomshuwalense. Ngaphezu kwalokho, zonke iziphathimandla zenze kube nzima ukuba nezinhlelo ezimbili zemishuwalense yemoto - uhlelo olungekho-iphutha , kanye nesistimu ye-Tort. Uhlobo lwangaphambili lomshuwalense ohlonishwayo emazweni amaningi lusho ukuthi umshuwalense wakho uyokhokhela izicelo zokulimala kungakhathaliseki ukuthi ubani obangela ingozi empeleni. Inani elikhokhwa lifike kumkhawulo ocacisiwe, futhi uma uhilelekile engozini, umphathiswa wakho unecala lokukhokha ukulimala. Ngokumelene nalokhu, uhlelo lweTort kulindeleke ukuthi iqembu elimele lizinakekele izindleko zezokwelapha kusuka epaketheni labo bese libiza kumuntu ophethe umshuwalense othintekayo njengempindiselo.
Inani lezingozi kanye nokweba kwenzeka ikakhulukazi e-USA, kubalulekile ukuba wonke umnikazi wemoto athenge leyo nzuzo yomshwalense ukuze aqinisekise kokubili imoto kanye nomnikazi wayo ngezikhathi zokudinga.
E-USA uma ufuna ukuba nemoto emgwaqweni kufanele ube nomshuwalense wezimoto. Abanye bathi ngisho banomkhawulo wokubheka lapho kufanele ube nesamba esithile sama dollar; ngokuvamile, lokhu kubizwa ngokuthi ukuqala kokuqala.
Indlela Yokuthola Umshwalense Wezithuthi Omusha E-USA
Umshuwalense we-Auto ubeka ingozi emotweni. Inkampani yomshuwalense ikhokhela ukulahlekelwa kwezimali kumnikazi ngokubuyisela imali encane ekhokhwa ngezikhathi ezithile. Inani elikhokhwa minyaka yonke libizwa ngokuthi i-premium, futhi inkontileka oyikhiphayo nenkampani yomshuwalense iyayaziwa njengenqubomgomo yomshuwalense. Inkampani yomshuwalense ikuvumela ukuba ubambe inkontileka, futhi ube ngumnikazi wezinqubomgomo.
Umshuwalense wemoto angeke ushibhe. Kodwa-ke, ngaphansi kwezimo ezingalindelekile zokulahleka noma ukulimala imoto yakho, isinxephezelo sizobonakala sinjengo-godsend. Ukuzikhandla ngezikhathi zemikhosi yemali ukuvikela imoto yakho noma izimoto eziphethwe ibhizinisi lakho, kungase kubonakale kubi. Kukhona ukuthambekela kokuzama nokusika imigqa ngokusebenzisa amaphakheji amancane omshwalense wemoto. Noma kunjalo, ngisho nokulimala kwemoto encane kuyabiza ngokweqile; ngakho-ke, iphakheji encane angeke ikunikeze ukufakwa okubanzi ngenkathi uyidinga kakhulu.
Izinhlobo Zomshuwalense Wama-Auto E-USA
Izinhlobo ezivame kakhulu zomshuwalense wezimoto ezikhona e-US yi-Insability Assurance, Auto Collision and Comprehensive Insurance, Izinkokhelo Zezokwelapha kanye Nokuvikelwa Kwabantu Bokuzilimaza, nabakwa-Uninsured Motorists kanye nabakwa-Underinsured Motoring. Izinkampani eziningi zanamuhla zinikeza lezi zindawo.
Inkokhelo yomshuwalense wemfanelo ikhokhela umonakalo obangela abanye nompahla wabo. Ikhokhela izindleko zomthetho ezihilelekile kanye nezindleko zomuntu ohlukunyezwayo ozoya enkantolo ebiza umonakalo, ngaphakathi kwemingcele yakho yemfanelo. Endabeni yengozi, izindleko zokulungisa imoto yakho zihlanganiswa yomshuwalense we-collision. Umshuwalense ophelele uhlanganisa ukulimala okubangelwa izigameko ngaphandle kwezingozi zemoto, njengezinhlekelele zemvelo, ukweba, umlilo, ukulimaza, nokushaya isilwane.
Uma kwenzeka umuntu obanjwe inshuwalense kanye nomgibeli ogulayo abadinga ukwelashwa ukwelashwa ngokulimala komzimba ngenxa yengozi, lokhu kuhlanganiswa nokuhlinzekwa kweziNkokhelo zezokwelapha. Ukuvikelwa komuntu siqu kuzokukhokhela izindleko zezokwelapha kanye nomholo olahlekelwe nguwe kanye nomgibeli ohamba nabo uma belimale engozini.
Kungani Udinga Umshwalense We-Auto
Inhloso eyinhloko yimuphi umshuwalense ukuvikela umnikazi wezinqubomgomo nomndeni wakhe ngokumelene nemiphumela ephumela ekulimaleni okungalindelekile noma ekufeni kanye nemithwalo yemali uma kwenzeka lezi zinhlekelele. Kuyinto inkontileka phakathi kwenkhampani yomshuwalense ohlobene nawe, lapho uvuma ukukhokhisa imali ekhokhelwa yilapho inkampani yomshuwalense izodinga ukumboza uma kwenzeka izingozi.
Umshuwalense wezimoto uhlanganisa lezi zintathu eziyinhloko izindawo:
Ukuthengwa kwempahla - kubhekisela emonakalweni noma ukwebiwa kwemoto yakho
Ukutholakala kwemfanelo - kuhlobene nemithwalo yemfanelo yakho yomthetho kwabanye abangase babangele ukulahlekelwa kwempahla ukulahlekelwa ukukhubazeka
Ukuhlinzeka ngezokwelapha - kubhekisela ekunakekeleni kwezokwelapha, izindleko zokwelashwa, ukuvuselelwa, ukulahlekelwa amandla okusebenza, noma ngisho nezindleko zokungcwaba lapho kunezinkampani.
Umsebenzi Womshwalense Wezithuthi
Umshwalense we-auto uvikela futhi kumshayeli ongaqinisekisiwe noma abashayeli. Kulesi simo, abashayeli abasha noma abashayeli abangaqinisekisiwe abanakho inkampani yomshuwalense ukukukhokhela umonakalo okwenzekile, kodwa ngenhlanhla usenayo inkampani yakho yomshuwalense ukuba ithwale ukulahlekelwa.
Vikela ibhange elinikeze ukubolekisa imoto ukukhokhela imoto yakho. Ngoba uma kukhona inhlekelele eyenzekayo emotweni yakho, akekho ozokwazi ukubolekisa noma ukunikeza imali eyengeziwe kuwe ukulungisa imoto ngaphandle kwekampani yomshuwalense wezimoto. Uma kungenjalo, kuzodingeka ulungise umonakalo owenziwe emotweni ngokwakho, futhi lokhu kuzokuvimbela ukuba ukhokhele inkokhelo yenyanga mboleko yenyanga ngesikhatsi. Umphumela wukuthi ibhange ngeke likubole imali eminye esikhathini esizayo, nekhredithi emibi okwamanje okuyiyo okungenani isikhathi esiningi.
Gary Bailey Yiba Umshuwalense Omncane Wemoto Yamabhizinisi Amancane Uhlu
Author garybaileyPosted on March 8, 2019 March 8, 2019 Categories Umshuwalense Omncane Wemoto Yamabhizinisi Amancane JohannesburgTags abahlinzeki bomshuwalense benkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, abahlinzeki bomshuwalense wezempilo wenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, amazinga omshwalense wempilo yenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, Classic car umshuwalense guide and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, Imibhalo yomshuwalense wasekhaya yaseNingizimu Afrika and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, imihlahlandlela yomshuwalense wemoto yakudala and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, imininingwane yomshuwalense wemoto yakudala and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, inkampani yomshuwalense wenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, Inkampani yomshuwalense yenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, inkampani yomshwalense wemoto yenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, inkampani yomshwalense wezempilo yenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, inkampani yomshwalense yenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, inqubomgomo yomshwalense wezempilo yenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, inqubomgomo yomshwalense yenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, Isaphulelo somshuwalense ekhaya and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izidingo zomshuwalense wenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izincomo zomshuwalense wenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izindleko zomshuwalense wemoto zakudala and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izindleko zomshuwalense wenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izingcaphuno zemishuwalense ekhaya and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izingcaphuno zomshuwalense ekhaya and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izingcaphuno zomshuwalense zomzimba and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izinhlelo zomshuwalense wamazinyo ezinkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izinhlelo zomshuwalense wezempilo ezinkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izinhlobo zomshuwalense ezinkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izinkampani zomshuwalense ezinkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izinkampani zomshuwalense wenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izinkampani zomshuwalense wezempilo and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izinsizakalo zomshuwalense ezinkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, izinzuzo zomshwalense wemoto zakudala and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, okuyisisekelo somshuwalense wezimoto zakudala and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, thola i-inshuwalense yomndeni and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, uhlu lwezinkampani zakudala zomshuwalense wemoto and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, uhlu lwezinkampani zomshuwalense ezinkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, ukufaneleka komshwalense wemoto zakudala and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, ukuqhathaniswa komshuwalense ekhaya and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umphathi womshuwalense wenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, Umshuwalense wemoto engcono kakhulu ochwepheshe abasha and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wemoto izinkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wemoto ka-peter d james and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wemoto ochwepheshe and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezokwelapha and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezomthetho and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wemoto wabasebenzi abasha and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wemoto webhizinisi and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wemoto yezimoto zebhizinisi and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wenkampani kanye nobungozi and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wezempilo wenkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshuwalense wokuthuthukisa izinkampani and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshwalense wemoto omdala oqinisekisiwe and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, umshwalense wemoto omdala wokulinganisa and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe, Umshwalense wemoto zakudala uchazwe and Inqubomgomo Yomshuwalense Wesikebhe